Saddex qaybood oo kala duwan 3 Waxyaabo qiimo leh oo ku saabsan dagaalka Spam
Email waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud uguna habboon ee loo diro fariin. Emails waxay noqotey hab lagu kalsoonaan karo oo shirkado badani ay ka faa'iidaystaan ​​shaqooyinka kala duwan sida xaqiijinta saxiixyada iyo liisaska. Qalabka kala duwan iyo ogeysiisyada waxay gaari karaan dadka isticmaala si dhakhso ah iyada oo loo marayo emails.
Nasiib darro, dambiilayaasha internetka ayaa leh ikhtiyaarka isticmaalka spam si ay u fuliyaan dadaalkooda. Tusaale ahaan, waxaa jira emails aad u tiro badan oo ku xiran emails dad badan - nordexx cirrus 85v vod. Emailladaasi waxay ku jiraan xeelado badan oo ka dhigi kara dadka in ay ku guuldareystaan ​​inay gaaraan ugu badnaan ololaha suuqgeynta. Xaaladaha kale, fariimahan waxaa ku jira xiriiro si sahal ah loogu geyn karo qof bogga bogga.
Qaar ka mid ah hababka ay bixiso Lisa Mitchell, khabiirka hoggaanka ah ee Semt , ayaa kaa caawin kara inaad ka fogaato farriimaha spam.
1. Hayso emailadaada qarsoodi ah.
Cinwaanka emailka oo dhan waa spammer u baahan yahay inuu fuliyo waajibaadkiisa. Haysashada sirtaada sirta ah waa muhiim. Ha u soo bandhigin emailkaaga dad badan maxaa yeelay taasi waxay kordhin kartaa fursada luminta spamerka. Waxaa intaa dheer, waxaa suurtogal ah in qofku uu fariin u diro dhammaan emailada boostada. Shakhsiyaadka leh boggaga internetka, ha isticmaalin emailkaaga boostada. Spammers waxay leeyihiin qalab otomaasiyadeed oo badan oo heli kara oo isticmaali kara cinwaannada emailka ah ee jooga goobta..
2. Isticmaal faylasha spam.
Kuwani waa software oo leh awood ay ku ogaan karaan iyo xayiridda emaillada spam. Nidaamyadani waxay leeyihiin habab badan iyo khayraadyo taas oo ka dhigaysa inay kala saaraan emaylka spam ee emails macquul ah. Hubi in aad isticmaasho spam blockers ka yimid shirkado aamin leh. Email-ka ayaa ah hab fiican oo looga dhigi karo basaasku inuu fido. Sidaa darteed, waxay helayaan xayiraad degdeg ah. Google waxay leedahay emails ay u qabato jeegareynta spam iyo waxay soo saari kartaa qaar ka mid ah fariimahan. Waxay sidoo kale ku dhejin kartaa lifaaqyada khayaanada iyo Trojans.
3. Ha riixin indhala'aan.
Xaqiiji kalsoonida URL ka hor intaadan gujin. Mid ka mid ah siyaabaha lagama maarmaanka ah ee looga hortagi karo cawaaqib-xumada waa in laga hortago e-mailka spamerka oo dhan. Ugu horreyn, guji xidhiidh ayaa kaa dhigi kara bogga bogga. Marka labaad, lifaaqyada ku jirta email spam waxay ku jiri karaan Trojans, kuwaas oo aad u dhib badan marka ay timaado ammaanka kombiyuutarka. Dadka ku hawlan SEO ama hawlaha kale ee spams waxay isticmaalaan qalabyo raadinaya ka qaybqaadasho. Qalabkaas macnaheedu waa in wax la taabanayo emailka spam ay soo diri karaan jawaab-celin, iyaga oo xaqiijinaya in cinwaanka emailku uu sax yahay isticmaalka website-ka kasta.
Dad badan oo internetka isticmaala waxay ku dhacaan spam iyo weeraro kale oo xun. Qofka internetka u socda ayaa laga yaabaa inuu helo farriimo badan oo ka imaanaya ilo aan la garanayn. Email-kaasi waxay ku jiri karaan ololeyaal xayeysiin ah iyo sidoo kale hawlaha kale ee u baahan user si ay u fuliyaan hawl-wacyi-gal ah. Inta badan boosteejooyinka spam waxay sameeyaan dadka isticmaala khasaare weyn iyo sidoo kale sii kordhinta jilicsanaanta websaydhka. Waxaad ka hortagi kartaa dhibaatooyin badan oo ku saabsan spam adigoo isticmaalaya tilmaamaha kor ku xusan. Intaa waxaa dheer, waxaa jira isku dayo kale oo badan oo hack ah oo aad ka hortagi kartid inaad ka fogaato spam.